တရုတျ ဖုနျးရှပေညာ အရ ရခေဲသတ်ေတာပျေါမှာ တငျမထားသငျ့တဲ့ ပစ်စညျးတှေ….တကယျလို့ တငျထားမိရငျ ဘာဖွဈမလဲ…. – Nyi Ma Lay
တရုတျ ဖုနျးရှပေညာ အရ ရခေဲသတ်ေတာပျေါမှာ တငျမထားသငျ့တဲ့ ပစ်စညျးတှေ….တကယျလို့ တငျထားမိရငျ ဘာဖွဈမလဲ….
By Nyi Ma LayPosted on October 20, 2021
ဒီလိုပစ်စ ညျးတှတေငျထား မိမယျဆိုရငျ အခနျ့မသငျ့ ရငျ စီးပှားရေးခြှတျခွုံကပြွီး ဘာလုပျလုပျအ ဆငျမပွဖွေဈတ တျပါတယျတဲ့။
၁။ လြှပျစဈ ပစ်စညျးမြား။
ရခေဲသတ်ေတာ ဆိုတာ အကွီးစားလြှပျစဈပစ်စညျးတဈမြိုးဖွ ဈတဲ့အတှကျ သူ့အနားမှာ သံလိုကျစီးေ ကွာငျးတှဖွေဈပျေါနမှော အမှနျပါပဲ။ ပွီးတော့လြှပျစဈ ပစ်စညျးဆို တာလညျး သံလိုကျစီွးေ ကာငျးတှေ ထှကျပျေါနပေါတယျ။
အဲဒီသံလိုကျ စီးကွောငျး နှဈခုပေါငျးစုံ လိုကျခွငျးဟာ အိမျသားေ တှအတှကျ ကနျြးမာရေးကို အညံ့ဘကျသို့ရော ကျစပေါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မိုကျခရိုဝေ့ ဖျမီးဖိုကို ရခေဲသတ်ေတာပျေါ မထားသငျ့ပါဘူး။သူ့ဆီက တနျပွနျရောငျခွ ညျမြားထုတျလှတျနလေို့ ဖွဈပါတ ယျ။
၂။ ပစ်စညျးမြား စုပုံတငျထားခွငျး။
အိမျတှငျးမှာနရောကြ ဉျးတဲ့အတှကျ ပစ်စညျးအတျောမြား မြားကို ရခေဲသေ တ်တာပျေါတငျထား ကွတာကို ပရိသတျကွီးတို့ မွငျဖူးကွသလို ကိုယျတိုငျလညျး လုပျဖူးလိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာက ဖုနျးရှပေညာအရ ငှကေိုကိုယျစားပွုပါတယျ။
ရခေဲသတ်ေတာပျေါ ပစ်စညျးတှစေု ပုံတငျထာွး ခငျးဟာ ကိုယျ့ဘဏ်ဍာ တိုယကျကို ပိတျဆို့ထားသလို ဖွဈတဲ့အပွငျ သူတဈပါးမေ ကာငျးကွံတာကို ပါကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရခေဲသတ်ေတာပျေါ ပစ်စညျးတှစေုပုံ တငျထားရငျ ဖယျရှားလိုကျပါ လို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။
၃။ ရခေဲသတ်ေတာ နံဘေးတှငျ မီးဖိုရှိခွငျး။
ဖုနျးရှပေညာ အရ ရခေဲသတ်ေတာ မှာရဓောတျဖွဈပွီး မီးဖိုကမီးဓာတျဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မီးနဲ့ရေ ဆနျ့ကငျြဘကျ ဓာတျမြားအခငျြး ခြ ငျးတိုကျခိုကျကွသဖွငျ့ အိမျတှငျးရှိမိသားစုမြား အစာအိမျနှငျ့အူ လမျးကွောငျးဆိုငျ ရာရောဂါမြားဖွဈတတျ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မီးဖို သို့မဟုတျ ရခေဲသတ်ေတာ ကို နရောရှထေ့ားလိုကျပါ။
ကဲ..ပရိသတျကွီးတို့ရေ အိမျကရခေဲေ သတ်တာပျေါမှာဘာေ တှတငျ ထားမိသလဲ အမွနျပွေးကွညျ့လိုကျပွီး အထကျမှာေ ဖျာပွထားတာတှေ တငျထားမိတ ယျဆိုရငျတော့ အမွနျနရော ရှ့ထားလိုကျ ကွပါဦး။
ဒီလိုပစ္စ ည်းတွေတင်ထား မိမယ်ဆိုရင် အခန့်မသင့် ရင် စီးပွားရေးချွတ်ခြုံကျပြီး ဘာလုပ်လုပ်အ ဆင်မပြေဖြစ်တ တ်ပါတယ်တဲ့။
၁။ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ။
ရေခဲသေတ္တာ ဆိုတာ အကြီးစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြ စ်တဲ့အတွက် သူ့အနားမှာ သံလိုက်စီးေ ကြာင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဆို တာလည်း သံလိုက်စီြးေ ကာင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
အဲဒီသံလိုက် စီးကြောင်း နှစ်ခုပေါင်းစုံ လိုက်ခြင်းဟာ အိမ်သားေ တွအတွက် ကျန်းမာရေးကို အညံ့ဘက်သို့ရော က်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိုက်ခရိုဝေ့ ဖ်မီးဖိုကို ရေခဲသေတ္တာပေါ် မထားသင့်ပါဘူး။သူ့ဆီက တန်ပြန်ရောင်ခြ ည်များထုတ်လွှတ်နေလို့ ဖြစ်ပါတ ယ်။
၂။ ပစ္စည်းများ စုပုံတင်ထားခြင်း။
အိမ်တွင်းမှာနေရာကျ ဉ်းတဲ့အတွက် ပစ္စည်းအတော်များ များကို ရေခဲသေ တ္တာပေါ်တင်ထား ကြတာကို ပရိသတ်ကြီးတို့ မြင်ဖူးကြသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ဖူးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာက ဖုန်းရွှေပညာအရ ငွေကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာပေါ် ပစ္စည်းတွေစု ပုံတင်ထာြး ခင်းဟာ ကိုယ့်ဘဏ္ဍာ တိုယက်ကို ပိတ်ဆို့ထားသလို ဖြစ်တဲ့အပြင် သူတစ်ပါးမေ ကာင်းကြံတာကို ပါကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲသေတ္တာပေါ် ပစ္စည်းတွေစုပုံ တင်ထားရင် ဖယ်ရှားလိုက်ပါ လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
၃။ ရေခဲသေတ္တာ နံဘေးတွင် မီးဖိုရှိခြင်း။
ဖုန်းရွှေပညာ အရ ရေခဲသေတ္တာ မှာရေဓာတ်ဖြစ်ပြီး မီးဖိုကမီးဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးနဲ့ရေ ဆန့်ကျင်ဘက် ဓာတ်များအချင်း ချ င်းတိုက်ခိုက်ကြသဖြင့် အိမ်တွင်းရှိမိသားစုများ အစာအိမ်နှင့်အူ လမ်းကြောင်းဆိုင် ရာရောဂါများဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီးဖို သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ ကို နေရာရွှေ့ထားလိုက်ပါ။
ကဲ..ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ အိမ်ကရေခဲေ သတ္တာပေါ်မှာဘာေ တွတင် ထားမိသလဲ အမြန်ပြေးကြည့်လိုက်ပြီး အထက်မှာေ ဖ်ာပြထားတာတွေ တင်ထားမိတ ယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်နေရာ ရွှ့ထားလိုက် ကြပါဦး။
Previous post ဘယျအရပျ ဘယျဒသေမှာပဲ ဖွဈဖွဈ မွကှေကျဝယျတော့မယျဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနေ သခြောစဈဆေးပါ
Next post ပြံသနျးနစေဉျ အခြိနျအတှငျးမှာ ထူးထူးဆနျးဆနျး နဲ့ ပြောကျကှယျသှားသော လယောဉျမြား